कोरोना मिटर : आज १५ सय ६६ निकाे भएर डिस्चार्ज, थप एक हजार ४१ जना संक्रमित; उपत्यकामा ४०८ सङ्क्रमित थपिए | NepaleKhabar.com
कोरोना मिटर : आज १५ सय ६६ निकाे भएर डिस्चार्ज, थप एक हजार ४१ जना संक्रमित; उपत्यकामा ४०८ सङ्क्रमित थपिए
September 5, 2020 | 9:33 pm
काठमाडौँ, भदौ २० गते । पछिल्लो २४ घन्टामा देशभरिमा १५ सय ६६ जना कोरोना संक्रमित निकाे भएर डिस्चार्ज भएका छन् ।
यो अवधिमा १२ हजार चार सय ७३ जनाको नमुना पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा एक हजार ४१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
योसमेत देशभर हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या ४५ हजार दुई सय ७७ पुगेको छ ।
संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २७ हजार एक सय २७ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल संक्रमणुक्त हुने दर ६० प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यसैगरी सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले १७ हजार आठ सय ७० छ ।
संक्रमतिमध्ये २४ जना भेन्टिलेटर र एक सय ६७ जनाको आइसियूमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।
उपत्यकामा ४०८ सङ्क्रमित थपिए
नेपालमा कोभिड–१९ का एक हजार ४१ सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट थप एक हजार ४१ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । थपिएका सङ्क्रमितमध्ये ३४९ महिला र ६९२ जना पुरुष छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा थपिएका सङ्क्रमितसँगै देशभरि कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४५ हजार २७७ पुगेको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो नियमित प्रेस ब्रिफिङको क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको तीन जिल्लामा ४०८ सहित देशभरि सङ्क्रमित थपिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा ३२६, ललितपुरमा ३७ र भक्तपुरमा ४५ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ ।
हाल १७ हजार ८७० जनामा कोभिड–१९ का सङ्क्रमण सक्रिय रहेको छ । पछिल्लो चौबीस घण्टामा १२ हजार ४७३ जनाको आरटी पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित निको भएर घर फर्केका छन् । प्रवक्ता डा. गौतमले पछिल्लो चौबीस घण्टामा एक हजार ५६६ जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्केका छन् । एकैपटक उच्च सङ्ख्यामा सङ्क्रमित कोभिड–१९ बाट मुक्त भएसँगै निको हुन दर ६० प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म २७ हजार १२७ जना कोभिड–१९ सङक्रमित निको भएर घर फर्केका छन् ।